ထိုင်းနိုင်ငံက ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအား ကွာရန်တင်းကင်းလွတ်ခွင့် ပြန်လည်စတင် - Xinhua News Agency
ဘန်ကောက်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံက လာမည့်လမှစ၍ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသော ပြည်တွင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ကွာရန်တင်း (quarantine) ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း COVID-19 လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
အိုမီခရွန် (Omicron) မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဆက်စပ်သော COVID-19 ရောဂါ လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လာခြင်းကြောင့် Test & Go ကွာရန်တင်းကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အား ကြေညာပြီး သီတင်းပတ် ၇ ပတ်ကြားပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှစ၍ ယာယီဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Grand Palace တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်နေသော ခရီးသွားဧည့်သည်တစ်ဦးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပြီး ပထမဆုံးနေ့နှင့် ငါးရက်မြောက်နေ့များတွင် RT-PCR စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အတူ ကွာရန်တင်း (quarantine) လိုအပ်ချက်များမရှိတော့ဘဲ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ရောဂါအခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာ (CCSA) ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Taweesin Visanuyothin က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသူများအား ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသော ဟိုတယ်များ၌သာ ဆေးစစ်ချက်အဖြေများကို စောင့်ဆိုင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ တည်ရှိရာနေများအား ခြေရာခံနိုင်သည့် app ကို ဒေါင်းလုတ် (download) ပြုလုပ်ထားရန် သဘောတူထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း Taweesin က ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောဂါကူးစက်မှုများမှာ ထိန်းချုပ်နိုင်သောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းနှင့် ရောဂါကူးစက်မှုလမ်းကြောင်းကို တည်ငြိမ်စွာထိန်းထားလျက် ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်နှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရန် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသည့်ကြားမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရက ကန့်သတ်ချက်အစီအမံများ ပိုမိုဖြေလျှော့ရာတွင် ယမကာရောင်းချသော စားသောက်ဆိုင်များအား ယခင်သတ်မှတ်ချက်မှ ၂ နာရီ ထပ်တိုးကာ ည ၁၁:၀၀ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဘားများနှင့် ညကလပ်များကိုမူ ဆက်လက်ပိတ်ထားဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၈,၁၂၉ ဦးရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၁၉ ဦးထပ်မံရှိခဲ့ကြောင်း CCSA အရ သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ သန်း ၇၀ နီးပါး၏ ၆၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၁၅.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinuha)
BANGKOK, Jan. 21 (Xinhua) — Thailand will resume its quarantine-free travel scheme for fully-vaccinated inbound visitors from next month, the country’s COVID-19 task force announced Thursday.
The Test & Go quarantine exemption scheme was suspended from Dec. 22 only after seven weeks of its launch due to the fast spreading of COVID-19 linked to Omicron variant.
Beginning Feb. 1, fully-vaccinated visitors could be able to enter without quarantine requirements as long as they take RT-PCR tests on the first and fifth days of their arrival in Thailand, Taweesin Visanuyothin, spokesperson of the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), said atanews briefing.
He said the infections in Thailand are considered to be atamanageable level, and expected to be stabilizing and going intoadeclining trend.
Inafurther relaxation of restrictive measures, the government allows restaurants to serve alcohol until 11:00 p.m., extending two hours from previous requirement. However, bars and nightclubs will remain closed.
As of Wednesday, 66.4 percent of the country’s nearly 70 million population had been fully vaccinated, while 15.3 percent had received booster shots. ■
Photo 1 : People are seen at the Suvarnabhumi International Airport in Bangkok, Thailand, Jan. 11, 2022. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Photo2: A tourist takes photos at the Grand Palace in Bangkok, Thailand, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Wang Teng)
Photo3: People receive the COVID-19 vaccine in Bangkok, Thailand, on Jan. 17, 2022. (Xinhua/Rachen Sageamsak)